Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Nairobi Nairobi
I-1-10 yoluhlu lwe-391
Ipropathi yeNdawo yokuthengisa kwiRhafu eRuaraka, eNairobi
Bume ngobuchule e-Baba Dogo. Oku kuya ezantsi kungama-7400 Sq ft ane-5400 sq ft yendawo yomgangatho womhlaba kunye ne-2400 sq ft ye-mezzanine. Ukuya ezantsi kukonyusa iimpahla zeetoni ezimbini. Kukho nendawo eyaneleyo yokuhambisa isikhongozeli.
Yeyokuqesha | 7405.57 Sq Ft
Published by Hiraj Parmar
Ipropathi yeNtengiso yeRente eLavington, eNairobi
Ime malunga nendawo engaphantsi kwemizuzu emi-5 ukuya mall kule ndawo igumbi li-6 igumbi elifanelekileyo elifanelekileyo ukuba i-ofisi ithule. Indlu ineefestile ezinkulu ezivumela ukungena komoya ngokwaneleyo kunye nokukhanya kwendalo. Ukusondela kwayo kuJames Gichuru kuyenza ifikeleleke ngokulula kusetyenziswa izithuthi zikawonkewonke. Indlu...
umbono Iimpahla zentengiso ishicilelwe 1 day ago
Ifumaneka indawo yokurenta yindlu enkulu yokuthengisa enamagumbi amane yokulala indawo ethe cwaka kwindawo ethe cwaka ecaleni kweMuziho yeNdlela eLavington elungele ukusetyenziswa eofisini kwinkampani / ye-NGO kunye neqela elikhulu. * Indawo enkulu yokwamkela inani leemoto * Igadi ngaphambili nangasemva kwesakhiwo * kakhulu ...
Ipropathi yeNtengiso yeRente eKilimani, eNairobi
Iofisi yolawulo ilungele indawo ezincinci zokubonisana indawo le ifikeleleka ngokulula kwindlela yeNgong okanye yeGitanga. Imiswe kwindawo ezolileyo kwaye ilungele ukusetyelwa iofisi. Iyunithi ibekwe kumgangatho wokuqala. Inendawo yokupaka ininzi. Inamandla okugcina.
Published by Karuga Munyua
Intengiso yePropathi yokuRentela e-Hurlingham, eNairobi
Le ndlu ingentla ifumaneka eHurlingam umzuzu nje ukusuka kwindlela yeArgwings Kodhek. Yayisetyenziswa njengesibhedlele kwaye nayiphi na indlela inokuguqulwa ibe ziiofisi. Izixhobo zibandakanya; * Amagumbi okulala amathandathu alungiselelwe onke kwigumbi lokulala elikhulu * Indawo yokuphumla enkulu kunye nendawo yokutyela yodwa * ikhitshi le-Spacios lilungele iikhabhathi ...
Published by Nehemia 1 Osore
Intengiso yePropathi yeNtengiso yerente eWestlands, eNairobi
IOfisi yeNkulumbuso okanye iRetail Space Sky Park Plaza ikwindawo eyiNdawo yeWaiyaki, kunye nokufikelela kufutshane neSital Centre naseWoodvale Close. Le yunithi ye-11 iyunithi yeqokobhe, ilungele iofisi okanye ivenkile kunye nentengiso yangaphambili yeglasi. Izinto zokwakha zibandakanya ukhuseleko ezingama-24, amandla ongemva kwesisekelo, i-CCTV, i-high spe ...
umbono Iimpahla zentengiso ishicilelwe iintsuku 2 eyadlulayo
Intengiso yePropathi yeNtengiso yerente eGigiri, eNairobi
Indlu enkulu yoRhwebo kufutshane ne-UNEP Le ndlu yentengiso ihlala ngaphezulu kwe-acre yomhlaba. Bekwe kude kwendlela ye-UNEP, kufutshane nomqobo weRunda kunye neRosslyn Academy. Indawo efanelekileyo, kwaye ilungile, kodwa ikufuphi ne-UN HQ. Indlu imalunga ne-15,000 sq ft yendawo eyakhiweyo, inemigangatho emi-3, kunye namagumbi angaphezu kwe-15 ...
Intengiso yePropathi yeNtengiso yeRhafu ePaki, eNairobi
Olu luphawu olubalulekileyo lmpumelelo entliziyweni yeParklands. IZiko lezoNyango lwePaki yindawo entsha yokushishina ekwi-3rd Parklands ecaleni kwePedheal Plaza ngakwesi sibhedlele iAga Khan University. Ipaki idala indawo enempilo yeshishini apho imibandela ibonelela khona ...
Iimpawu zeNdawo yeOfisi; * Igumbi lokulala eli-3 * igumbi lokuhlambela eli-2 * Indawo yasekhitshini * Indawo yokugcina izilwanyana kwigumbi lokuphumla
umbono Iimpahla zentengiso ishicilelwe iintsuku 3 eyadlulayo
Ubume obucwangcisiweyo kuWestland Road yile: Iamagumbi ama-2 Amagumbi asetyenziselwa iOfisi kuphela. Indlu yangasese yangasese yendawo yokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela. Ukuhlala kwigumbi cum kwindawo yokutyela. Ikhitshi kunye neekhabhathi kunye nesitya sokuhlambela ngentsimbi. Ukufumaneka ngokuKhuselekileyo kunye neNdawo eKhuselekileyo emva kwe-AVIC BUILDING, villa ...
Yeyokuqesha | 1291.67 Sq Ft
umbono Iimpahla zentengiso ishicilelwe iintsuku 4 eyadlulayo
Igama elithile iipropathi zorhwebo (ekwabizwa ngokuba yiarhente yokuthengisa okanye yokuthengisa, ukutyala imali okanye ipropathi yengeniso) kubhekiswa kwizakhiwo okanye umhlaba ekujongwe ukuba uvelise inzuzo, nokuba ingeniso yemali okanye ingeniso yerenti.
INairobi () yeyona dolophu inkulu kunye neyona dolophu inkulu yaseKenya. Eli gama livela kwibinzana lamaMasai i-Enkare Nairobi, eliguqulela "amanzi apholileyo", isalathiso kumlambo iNairobi ohamba phakathi kwesixeko. Isixeko esifanelekileyo sinabemi abangama-4,397,073 kubalo lwabemi be-2019, ngelixa indawo yedolophu inabemi abangama-9,354,580 1899. Esi sixeko sithandwa njengesiXeko esiLuhlaza eLangeni.uNairobi wasekwa ngonyaka we-1907 ngabasemagunyeni baseBritane East Africa, njengedepho kaloliwe ku-Uganda Railway. Idolophu yakhula ngokukhawuleza ukuze ithathe indawo yeMombasa njengekomkhulu laseKenya ngo-1963. Emva kwenkululeko ngo-1,795, iNairobi yaba likomkhulu leRiphabhlikhi yaseKenya. Ngexesha lobukoloniyali baseKenya, isixeko saba sisiseko secandelo lekofu, iti kunye nomzi mveliso wecolony. Esi sixeko siseMfuleni i-Athi kumazantsi eli lizwe, kwaye sineemitha ezisisi-5,889 seemitha (2019 ft) ngaphezulu komphakamo wolwandle.Ngokubalwa kobalo bantu lwango-4,397,073, kwindawo yolawulo lwaseNairobi, abahlali abangama-696 babehlala phakathi kwe-2 km269 ( Ziyi-100 sq mi) .Kungamawaka ngamashishini aseKenya kunye neenkampani ezinkulu zamazwe angaphezulu kwe-10, kubandakanya neNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yezeNdawo (UNokusingqongileyo) kunye neOfisi yeZizwe eziManyeneyo eNairobi (UNON), eNairobi sisixhobo esimiselweyo seshishini nenkcubeko. . I-Nairobi Securities Exchange (NSE) yenye yezona zinkulu e-Afrika kunye neyesibini kwindawo yesibini kwilizwe lonke. Luhlobo lwesine olukhulu kunazo zonke eAfrika ngokuhambelana nomthamo wezorhwebo, okwaziyo ukwenza urhwebo lwezigidi ezilishumi ngosuku.